Revon’ny ‘Daidougei’n’i Japana – Zava-kanto An-Dàlambe · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Novambra 2012 6:48 GMT
Vakio amin'ny teny English, বাংলা, polski, Français, Español, русский, 日本語
“Daidougei” dia ireny karazana fampisehoana an-dalàmbe ireny any Japana. “Daido” dia midika hoe làlam-be ary “Gei” dia midika hoe ny seho. Ny mampihomehy, noho ny fandraràna araka ny lalàna Jàpone mikasika ny fivezivezena an-dalàmbe [ja] sy ireo fepetra maro natsangan'ny manampahefana eo an-toerana, dia tsy azo atao ny manao fampisehoana an-dàlambe. Mila fahazoan-dàlana manokana raha hanao Daidougei.
Vao tsy ela akory dia maro ireo karazan-kevitra no naroso nanohanana ireo mpanakanto an-dàlambe ireo; ny Governemanta Metropolitain ao Tokyo dia namorona fandaharan'asa iray [ja] hanolorana fahazoan-dàlana ho an'ireo mpanakanto hiantsehatra an-dàlambe izay nankatoavin'ny governemanta. Ao amin'ny prefektioran'i Kanagawa, indroa isan-taona ireo mpilatsaka an-tsitrapo no mikarakara “Ny Fetiben'ny Noge-Daidougei” mba hamelona ilay faritra amin'ny fanaovana fampisehoana an-dàlambe [ja]. Nefa, dia lazain'ny olona sasany ho tsy ampy izany tetikady izany.
Rehefa nanontaniana izy ireo ny amin'ny zava-tsarotra nandalovany, mpanakanto iray Thankyou Tezuka namaly hoe ” Izany hoe izahay tsy mahazo alàlana haneho ireo zava-bitanay an-kalalàhana noho ireo lalànan'ny fifamoivoizana, ireo fifehezana maro isan-karazany sy ny maro hafa”.[ja]
Ilay bilaogera Taiki [ja] dia manoratra mikasika ireo fandraràna araky ny lalàna mikasika ny fampisehoana an-dàlambe:
Olon-tsotra iray mpaka sary, voasodokan'ny zavakanton'ny fampisehoana an-dàlambe Daidogei, dia nandany taona maro naka sary azy io. Akira no anarany. Izao no lohatenin'ny bilaoginy “Ny sarin'i Daidogei no sary rehetra nalaiko, ary na izaho aza tsy mahafantatra hoe maninona aho no lasa adala amin'io.”[ja]
Notantarainy fa ny fihaonany taminà mpanantalenta anankiray “Gilyak Amagasaki” [ja] no nitarika azy voalohany haka sary ny “Daigougei“.
“Gilyak Amagasaki” dia mpanakanto iray manandratra ny fihetsehampo mahery vaika, ny angovo sy ny alahelo lalina amin'ny alàlan'ny dihy. Nahita azy nandihy teny an-dàlana feno ranomandry aho ary, dia teo aho no nanomboka naka sary ireo mpanakanto maro hafa. Efa lasa nanana fahazarana mitety tanàna miaraka amin'izy ireo aho ary dia nandeha ihany koa tany amin'ireny faritra niharan-doza taorian’ ilay horohorontany lehibe tany Hanshin tamin'ny 1995 ireny. Tena manainga ny Fanahiko ny fomba fiainany sy fisainany. Mpampianatra ahy izy.
Azonao jerena ao amin'ny Tahirin-tsarin'i Akira ao amin'ny Facebook ireo sary hafa maro[ja]. Nomeny izao fanazavana izao [ja] tamin'ny nanamboatra ireo tahirin-tsary: